Burma Partnership » Burma Rivers Network Welcomes NLD’s Concerns About Nationwide Impacts of Myitsone Dam
By Burma Rivers Network • January 17, 2011
Construction of the 152 meter-high Myitsone Dam, which will export electricity to China, began officially late last year. Thousands of Chinese migrant labourers have been brought in to build the dam, which will inundate the famed Myitsone confluence at the source of the Irrawaddy in Kachin State and permanently displace 15,000 people.
The dam, the first inaseries of seven on the Irrawaddy and its tributaries, will have disruptive impacts on millions living downstream. Water will be stored and released depending on power demands in China, causing unpredictable water shortages and surges. This, in addition to decreased fish populations and blockage of rich sediments will affect countless farmers, fisherfolk and boat-operators along the river.
In the rush to extract resources from the potential flood zone, thousands are mining the riverbanks for gold, and dumping toxic mercury and cyanide into the water. Despite the serious threat to the health of downstream communities, there is no regulation of these dangerous practices.
The seven dams on the Irrawaddy’s headwaters will produce 17,160 MW of electricity, five times the total current power production capacity of Burma, yet most of the power will be exported to China. Nearly 80 % of the Burmese population is living without electricity, with electricity consumption rates per capita under 5% of China.
“The Irrawaddy isacritical artery for Burma – cutting it off at its source will affect the entire country,” said BRN spokesperson Sai Sai. “We strongly encourage all the political parties and civil society inside Burma to stand up and protect the river. Burma’s water resources should not be controlled by foreign engineers, but should be managed for the benefit of people in Burma.
တနိုင်ငံလုံး ဆိုးကျိုးထိခိုက်မည့် မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်မှုအပေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဧ။် စိုးရိမ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာကွန်ယက်မှ ကြိုဆိုခြင်း။
ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၁
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသခံလူထုများ ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးနေသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ဆန်းစစ်မှု မရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေကာတာများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောက်လုပ်နေခြင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံး ဆောက်လုပ်နေသည့် မြစ်ဆုံရေကာတာကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဆိုးကျိုးထိခိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဧ။် လတ်တလော ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာကွန်ယက်မှ ကြိုဆိုပါသည်။
တရုတ်ပြည်သို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတင်ပို့ရေးအတွက် အမြင့်ပေ ၁၅၂မီတာ ရှိသော မြစ်ဆုံရေကာတာကို ယခင်နှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထောင်ချီသော တရုတ်အလုပ်သမားများ စီမံကိန်းနေရာသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းသည် လူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ခန့် ရေရှည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်စေရုံ သာမက ဧရာဝတီမြစ်ဧ။် မြစ်ဖျားပိုင်း အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော လူသိများသည့် မြစ်ဆုံ နေရာမှာ ရေလွမ်းမိုးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ၄င်းမြစ်လက်တက်များပေါ် ဆောက်လုပ်မည့် ရေကာတာ စီမံကိန်း ၇ ခုမှ ပထမဆုံးဖြစ်သော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းသည် မြစ်အောက်ပိုင်း တလျှောက်တွင် နေထိုင်နေသည့် သန်းပေါင်းများစွာသော လူများအား ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ရေသိုလောင်ခြင်း ရေလွတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် မမျှော်မှန်းနိုင်သော ရေခမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် ရေတက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မြစ်ရိုးတလျှောက်ရှိ လယ်သမားများ၊ လှေသမားများ၊ တံငါးသည်များသည် ငါး အရေတွက်များ လျော့နည်းလာခြင်း၊ သဘာဝနှုန်းတင်မြေ ပျက်စီးခြင်း စသည့် မရေမတွက်နိုင်သော ထိခိုက်ဆုံးရှံးမှုများ တွေ့ဆုံရပါမည်။
ရေလွမ်းနိုင်သည့် ဒေသများတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အလောတကြီး ထုတ်ယူရန်အတွက် မြစ်ကမ်းနဘေးတလျှောက် ထောင်ချီသည့် ရွေတူးဖော်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် အလွန်အဆိပ်သင့်သော မာကျူရီ(ပြဒါး)များ ရေထဲသို့စိမ့်ဝင် ပြန့်နှံ့သွားသဖြင့် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် မြစ်အောက်ပိုင်းနေ လူထုများ၏ ကျန်းမာရေးကို ကြီးကြီးမားမား ခြိမ်းခြောက်နေသော်လည်း တရားဝင် ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသည့် လုပ်ဆောင်မှုများလုံးဝမရှိပေ။
ဧရာဝတီမြစ်ဦးပိုင်းရှိ ရေကာတာစီမံကိန်း (၇) ခုသည် စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ၁၇၁၆၀ မီကာဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်လုပ်မှုထက် (၅)ဆ ပိုများသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အများစုကို တရုတ်ပြည်သို့ တင်ပို့ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်လူထု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိဘဲ နေထိုင်ကြရသည်။ နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူလူထုများ အသုံးပြုနိုင်သည့် စွမ်းအင်ပမာဏသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အသုံးပြုနှုန်း၏ (၅) ရာခိုင်နှုန်း အောက်သာ ရှိနေသည်။
“ဧရာဝတီမြစ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလွန်အရေးပါတဲ့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်..မြစ်ရဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်းကို ဖြတ်လိုက်ရင် တနိုင်ငံလုံး ထိခိုက်နစ်နာမယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာကွန်ယက်မှ စိုင်းစိုင်းက ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနဲ့ လူထုအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို အတူတကွ လက်တွဲပြီး မြစ်ချောင်းများကိုကာကွယ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ရေအရင်းအမြစ်များကို နိုင်ငံခြား အင်ဂျင်နီယာများရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ မခံသင့်ဘူး။ မြန်မာပြည်လူထုအားလုံး အကျိုးအတွက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် စီမံခန့်ခွဲသင့်တယ။် ” ဟု စိုင်းစိုင်းမှ ထပ်မှန်ပြောပါသည်။
Sai Sai – +66(8)9755735
Ah Nan – +66(8)48854154
Email – burmariversnetwork@gmail.com, www.burmariversnetwork.org
Tags: Burma Rivers Network, Burmese, China, Dams, Development Project, Myitsone Dam, National League for Democracy